Waa in Talaabo sharciya laga Qaadaa Wakiilka Somaliland ee Addis ababa. | ogaden24
Waa in Talaabo sharciya laga Qaadaa Wakiilka Somaliland ee Addis ababa.
In kaste oo shaqadiisu tahay dilaal oo uusan lahayn wax Diplomatic Immunity ah oo laga xayuubiyo hadana waxaa dambi ah in isagoo shisheeya ah uu Faragalin Amni iyo mid siyaasadeed kusameeyo dalkii uu martida u ahaa.
Wakiilka Hargaysa ee Addis ababa waxaa uu Talaabay wax kaste oo sharci ah waxaanu ka Gudbay red line-ka diblamaasiyada, waxaanu si cad ugu xad Gudbay Qaranimada iyo Haybada dawladnimo ee dalka Itobiya Guud ahaan iyo Gaar ahaan tan deegaanka Somaalida oo uu si ula kac ah u weeraray.
Wakiilku waxaa uu si Qaawan oo aan Leex leex lahayn u Faragaliya arimaha siyaasada iyo Amniga dawlada deegaanka Somaalida, waxaana isaga oo Adeegsanaya magaca mid kamida beelaha deegaanka uu si Toosa u baahiyay Hadalo dhiilo colaadeed xambaarsan oo uu ku kicinayo beesha uu magaceeda u Gafay.
Waxaa uu Af buux kusheegay in deegaanka Somaalida ay u badan tahay beesha uu magaceeda adeegsanayay halka uu beel kalana kusheegay inay tahay minority, balse ay beeshaasi tahay tan Hogaanka deegaanka haysa iyada oo tii majoratiga ahaydna Joogta, taasi oo ah Hurinta colaad iyo dagaal sokeeye oo dhex mara Labadaasi beelood ee uu u kala Abtiriyay shakhsigaasi Ajanabiga ah.
Ma’ha dublamaasi laga xayuubinayo xasaanadii dublamaasinimo oo dalka laga Eryayo balse waa shakhsi dilaal ahaan ugu Jooga magalada Addis ababa mamulka Hargaysa, sidaa darteed waa in mamulka dawlada deegaanka Somaalidu Talaabo sharci ah oo deg dega kaqaado, lagana Abaal marayo xad Gudubka sharci iyo Faragalinta Amni iyo siyaasadeed ee uu kula kacay dawlada deegaanka Somaalida iyo dadkeeda.
Waxaa Hubaala hadii aan dambiilahan si deg dega sharciga loo Horkeenin in looguna ciqaabin Faragalinta uu kusameeyay sharafta iyo Haybada dawladnimo ee DDS, in haatan wixii kadambeeya ay DDS noqon doonto meel aan La kala lahayn oo cid waliba iyada oo magac Qabiil Huwan ay waxay doonto kasamayn doonto, taasi oo Gabi ahaan ba meesha kasaari doonta Haybada iyo Hanaankii dawladnimo ee shacabka Somaalida Ogadenia dugsanayay.